& Kulindeleke ukuba inikezele nge-iphone 6s esele ihlawulwe nge- $ 300 nje
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-AT & T kulindeleke ukuba inikezele nge-iPhone 6s ehlawulelwa nge- $ 300 nje
Kubonakala ngathi i-AT & T ithathe isigqibo sokuyikhaba inotshi xa kuziwa kwiminikelo ye-iPhone. Umphathi we-US uceba ukuqala ukuthengisa ii-iPhone 6 kunye nee-iPhone 6s ngaphezulu kwamaxabiso ahloniphekileyo.
Abantu ngaphaya9to5Macndinelizwi lokuba i-AT & T iya kubonelela nge-iPhone 6s ehlawulelweyo kunye ne-iPhone 6s Plus nge $ 344.9 kunye ne- $ 444.99 ngokwahlukeneyo. Isivumelwano siya kufumaneka kwi-AT & T & apos; s $ 45 / isicwangciso senyanga, kodwa ixabiso libandakanya indleko yenyanga yokuqala, enciphisa ixabiso le-iPhone 6s kunye ne-6s Plus ukuya kwi- $ 300 kunye ne- $ 400.
Ukuba ingxelo ichanekile, ezi zixhobo ziya kujoyina uluhlu lwee-iPhones ezihlawulelweyo ezibonelelwa yi-AT & T ngamaxabiso asezantsi ecaleni kwe-iPhone 6 kunye ne-iPhone SE. Xa kuthelekiswa, iT-Mobile ithengisa IPhone 6s kwaye 6 Ngaphezulu I $ 450 kunye ne-550 yeedola, ngokwahlukeneyo, ke wena & amp; ll uya kugcina kakhulu ($ 150) ukuba uthatha isigqibo sokuya kwisivumelwano se-AT & T & amp.
Ingxaki ekuphela kwayo kukuba asazi ukuba ii-AT & T ziyayiqala nini inkuthazo entsha. Amarhe okuba isivumelwano siza kuhamba kwangoko namhlanje, kodwa yile nto siyaziyo ngalo mzuzu.
Ulwesihlanu omnyama ongavulwanga ngeefowuni ngo-2016
I-PayPal ibonelela ngamakhadi esipho e-iTunes edijithali ngesaphulelo se-10% ukuya kwi-15%
Imidlalo emi-5 ephezulu yeSuperman ye-Android kunye ne-iOS-gcina iplanethi njengendoda yensimbi!